Yakachipa Yepamusoro Yemhando Inotakurika CO2 Fractional Laser Vaginal Inosimbisa Scar Mole Ganda Rejuvenation Machine Vatengi uye Fekitori | VTEX BOKA
Smart scanning musoro, nyore kushanda uye kuchengetedza nguva.
Musoro wekuvhiya unonyanya kushandiswa kucheka tag yeganda uye nzara dzakadzika, mukomboni nevus uye intradermal nevus nezvimwe.
Gynecology misoro1, 360 ° uye 90 ° kurapwa, Goridhe Yakapetwa vertebral yemuviri laser ine yakanyanya kuratidzika uye iri nani yekurapa maitiro.
Gynecology misoro2, vulva labia kurapwa, Labia kuchenesa Melanin kubviswa.
Aviation plug kunze inoshandisa yepamusoro simbi chiwanikwa, makumi maviri neshanu goridhe kwakakurudzira solder pini mukati.Inoita kuti link iwedzere kuvimbika uye yakasimba, bata kuti igadzikane. Kugadzikana uye mhando yemachini yakagadziridzwa kwazvo.Inowedzera isina guruva chivharo kuti uwane guruva-chiratidzo uye antifouling basa. Inoonekwa inoyevedza uye akasiyana mavara anogona kusarudzwa (silvery chena, tsvuku uye bhuruu).
Laser emitter: Laser inotengeswa kubva kuUSA, Simba rekuburitsa rakakura kupfuura 40W, Hupenyu hwebasa: maawa 2000.
Iyo nyowani dimmer bracket inogona kudzikiswa pasina kubvarura muchina
7 ruoko rwakabatana rwakabatana, 360 • inoshanda zvakasununguka, ichideredza zvakanyanya kurasikirwa kwesimba
Matatu mhedzisiro ye laser pane tishu:
1. Photothermal mhedzisiro:
Iyo photothermal mhedzisiro yakakamurwa kuita kupisa, kupisa kusimbisa uye kupisa kwemafuta. Thermal mhedzisiro: Kana tembiricha ikakwira kusvika padanho rinosvika makumi matanhatu ℃ -65 ℃, collagen tambo dzinogona kudzikira kusvika ku1 / 3 yehurefu hwepakutanga uye hupamhi hwe collagen hunowedzera, uye kuvimbika kwechimiro chinoenderana kwetissue hakukanganisike; kupisa kwekushisa: kana tembiricha yakakwira kupfuura 75 ℃, uye iyo nguva yakareba zvakakwana, zvinokonzeresa kupisa kwechikafu, uye imwe huwandu hwekupararira kwekushisa huchaunza hunogara uye hwakajeka hwekuvakazve ganda; kupisa kupisa: Kana tembiricha yakakura kudarika 300 ℃ uye nguva yacho yakwana, kupisa Konzera kuputika kwetishu, kupisa, kupwanya kwemamorekuru uye kuumbwa kweplasma, zvichitungamira mukushungurudzika kwetishu.
2. Photodynamic mhinduro
Maitiro ekuti mwenje unoshatisa iwo munyama, zvichikonzera imwe kana nhevedzano yekuchinja kwemakemikari munyama kuita kuti chikamu chinorwara (chakanangwa matishu) chinyatso kurapwa kana kuvandudzwa.
3. Kukurudzira kwechiedza
LCD skrini 10,4 padiki ruvara kubatwa chidzitiro
Simba rekuburitsa 40W
Laser kunobva RF chubhu
Laser goho modhi Super pulse, CW, kuroora kwega, kudzokorora kupomba
Kushanda muoti Fractional, zvakajairika, gynae, vulvae modhi
Kuongorora maitiro Kurongeka, kusagadzikana, kusarongeka
Kuongorora nzvimbo 0.1 * 2.6mm-20 * 20mm
Spot chinhambwe 0.1-2.6mm (chinjika)
Kugara kwenguva 0.1-10ms
Kuongorora zvimiro Mutsara, mativi mana, rectangle, katatu, hexagon, denderedzwa uye oval
Kutonhora maitiro Kutonhora kwemhepo
Laser sosi hupenyu 7 ruoko rwakabatana rwakarongedzwa kuitisa laser
Magetsi 220V / 110V
Laser sosi hupenyu Maawa 20000
Divi remuchina 80 * 60 * 29cm isina ruoko rwakatsanangurwa
Pasuru mureza Aluminium alloy bhokisi
Huremu hwese 34kg
Pashure: Fractional CO2 Laser Vaginal Tightening Laser Medical CO2 Laser Acne Scar Kubvisa Machine
Zvadaro: Fractional CO2 Laser Vaginal kusunga Machine
Yakanakisa CO2 Fractional Laser Machine
CO2 Laser Fractional Runako Midziyo
Fractional CO2 Laser Chiremba
Fractional CO2 Kuvandudza Laser
Laser Fractional CO2 Muchina
Fractional CO2 Laser Vaginal kumanikidza Laser M ...